Wararka - Ahmiyadda Talaabooyinka Ciid-ka-sameynta ee looxa-qorista
Ahmiyada ay leedahay talaabooyinka bacaadka ah ee alwaaxa
Hababka wax lagu shiido waxaa ka mid ah shiididda qallalan, biyo shiida, saliidda wax lagu shiido, wax shiidaya iyo daawada cadayga. Shiidi qallalan loo qaybin karaa shiidi qallafsan, shiidi flat iyo shiidi ganaax. Shiidi qallafsan guud ahaan waxaa loo isticmaalaa in laga soo saaro dhogorta qoryaha, nabarrada, calaamadaha xabagta iyo astaamaha qalinka oo ka soo baxa maran alwaax ah ka hor inta aan la daweyn Bai, halka sida caadiga ah wax lagu shiido inta badan waxaa loo isticmaalaa in lagu shiido diyaaradda weyn maro ciid ah iyo warqad ciid ah oo lagu duubay baako yaryar ama caag adag, sidaa darteed in saameynta isku dheelitirnaanta ay kafiican tahay, shiidida Fiican guud ahaan waxaa loo isticmaalaa putty, dahaadhka rinjiga, midab dhigista iyo midab buuxinta ka dib daaweyn kasta oo dhexdhexaad ah, shiidida ciidda waxay u baahan tahay taxaddar. Mashiinka biyaha ayaa loo isticmaalaa warqadda ciida ee lagu rusheeyey biyo (ama biyo saabuun leh) oo wax lagu shiido. Mashiinka wax lagu shiido waxay yareyn karaan calaamadaha duugga, waxayna hagaajin karaan habsami u-dahaadhka, waxayna badbaadin karaan foosha iyo warqadda ciida.
Tallaabooyinka sanding waxay ka hooseysaa seddex door oo muhiim ah:
No 1: Burrs saarista, wasakhda saliida leh dusha sare ee substrate
Maya 2: Dusha sare ee dusha sare ee la xoqay, dusha sare guud ahaan waa mid qallafsan wuxuuna u baahan yahay in la ciideeyo si loo helo dusha sare, markaa sanding waxay yareyn kartaa dusha sare ee qalabka shaqada;
Maya 3: Wanaaji xajinta lakabyada. Kahor intaadan ku buufin filim rinji cusub, guud ahaan waa lagama maarmaan in la nadiifiyo filimkii hore ee rinjiga ka dib qalajinta adag ka dib. Sababtoo ah daahanku wuxuu leeyahay liidasho liidata dusha sare ee siman, isku dhejinta mashiinka farsamada ee daahan ayaa la xoojin karaa ka dib marka la nadiifiyo.
Waxaan u baahannahay inaanu dooranno jihada saxda ah ee ku saleysan tallaabooyinka sanding kala duwan iyo sidoo kale shuruudaha sanding. Guud ahaan marka la hadlayo, waxaan raaci karnaa tilmaamaha hoos ku qoran:
Jidh adag oo Cadaan ah: 180 # Grit ---- - 240 # Grit warqad sanding ah
Plywood ama lakabka hoose ee sanding: # 220 # Grit ---- - 240 # warqad sanding Grit
Tallaabada labaad ee xitaa aasaasiga ah: 320 # Grit ----- 400 # Grit warqad sanding ah
Dusha sare ama rinjiga dhammaystirka: 600 # Grit ----- 800 # warqad sanding Grit
Nadiifinta rinjiga dhammaadka: 1500 # Grit ----- 2000 # Grit warqad sanding ah